.c ဖိုင်ကို compile လုပ်ချင်လို့ပါ။ - MYSTERY ZILLION
မူလ › Programming › C++ ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
.c ဖိုင်ကို compile လုပ်ချင်လို့ပါ။
yezeiyashein June 2009 edited June 2009 in C++ ကျွန်တော့်မှာ .c ဆိုတဲ့ဖိုင် extension နဲ့ ရှိတဲ့ဖိုင်ကို exe ဖိုင် ဖြစ်အောင် compile လုပ်ချင်လို့ဘယ်လိုများလုပ်ရသလည်းဆိုတာလမ်းညွန်ပေးကြပါခင်ဗျာ..........:77: မှတ်ချက်များ
Law Shay June 2009 edited June 2009 Registered Users yezeiyashein;44504 said:ကျွန်တော့်မှာ .c ဆိုတဲ့ဖိုင် extension နဲ့ ရှိတဲ့ဖိုင်ကို exe ဖိုင် ဖြစ်အောင် compile လုပ်ချင်လို့ဘယ်လိုများလုပ်ရသလည်းဆိုတာလမ်းညွန်ပေးကြပါခင်ဗျာ..........:77:
Use some C compiler.If you are using windows, use Visual C++ (from Visual Studio).Createanew Project, import your file into your project.I am not sure if Visual C++ recoginze .c extension. If not, change it to .cpp.However, if that .c file you have is from Linux, there may be minor မကိုက်ညီမှုများ. Therefore, you may need to hand-correct them all. (for example, hash_set interface) Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla